लघुवित्त कम्पनीहरुमा चमक, कुनको अवस्था कस्तो ? तथ्यांक भन्छ यस्तो
काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धमाधम दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हालसम्म ३४ लघुवित्त संस्थाहरुले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने अधिकांशको खुद नाफामा सुधार देखिएको छ । केहीको प्रतिसेयर आम्दानी घटेपनि अधिकांश अवस्था तुलनात्मक रुपमा सन्तोषजनक देखिएको छ । धेरैले चुक्ता पुँजीका साथमा जगेडा कोष पनि बढाएका छन् । हेरौं पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा कुन लघुवित्त कम्पनीको अवस्था कस्तो ?
चुक्ता पुँजी कसको कति ? कसको बढ्यो अनि कसको बढेन ?
चार लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी यथावत रहेको छ । छिमेक, डिप्रोक्स, ग्रामीण विकास र लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुँजी गत वर्षको जति नै रहेको छ ।
यता, किसान, मिर्मिरे, नयाँ नेपाल, सूर्योदय, स्वरोजगार र उन्नती माइक्रोफाइनान्सको पुँजी भने शतप्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको देखिन्छ ।
२ लघुवित्त बाहेक अरुको जगेडा कोष बढ्यो, सबै भन्दा बढी छिमेकको
वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने ३४ लघुवित्त कम्पनीमध्ये २ वटा बाहेक अन्य सबैको जगेडा कोषमा सुधार देखिएको छ । कालिका र नयाँ नेपाल लघुवित्तको भने जगेडा कोष घटेको छ । कालिकाको ७.५१% र नयाँ नेपालको ३.९०% ले जगेडा कोष घटेको छ ।
यता, छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको जगेडा कोषमा सर्वाधिक रकम जम्मा भएको छ । छिमेकको जगेडा कोषमा पुस मसान्तसम्म १ अर्ब ५६ करोड ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ जम्मा भएको हो । यो गत वर्ष भन्दा ११३.५४% बढी हो । त्यस्तै, जगेडा कोषमा १ अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा गर्नेमा निर्धन उत्थान, साना किसान र आरएमडीसी लघुवित्त पनि रहेका छन् ।
एनएमबि र कालिकाको नाफा घट्यो
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मा एनएमबि र कालिका लघुवित्त बाहेक बाँकी संस्थाले नाफा बढाएका छन् । गत वर्षको तुलनामा एनएमबिको ४३.१८% र कालिकाको २४.८१% ले नाफा घटेको छ । यता, सबैभन्दा धेरै नाफा छिमेक लघुवित्तले कमाएको छ । यस संस्थाले ३९ करोड २३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको हो ।
गत वर्ष भन्दा यस वर्ष छिमेकको नाफा ८१.६९% ले बढेको छ । यता, सर्वाधिक नाफा बढाउनेमा आरम्भ ४९७.७२% तथा किसान माइक्रोफाइनान्स ४१४.७६% लगायत रहेका छन् । त्यस्तै, फरवार्ड कम्युनिटीको ६.६५%, लक्ष्मी लघुवित्त ८.८७% र स्वावलम्बन लघुवित्त ५.४३% ले नाफा बढेको देखिन्छ ।
१२ कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी घट्यो, सबैभन्दा धेरै प्रतिसेयर आम्दानी फवार्ड कम्युनिटीको
पुस मसान्तसम्म १३ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । फस्र्ट, फरवार्ड कम्युनिटी, कालिका, महुली सामुदायिक, मिर्मिरे, नेसनल माइक्रोफाइनान्सको प्रतिसेयर आम्दानी घटेको छ । यसैगरी, नयाँ नेपाल, एनएमबि, सूर्योदय, स्वावलम्बन, स्वरोजगार, सपोर्ट र वोमिको प्रतिसेयर आम्दानी पनि गत वर्षको भन्दा थोरै भएको हो ।
यता, फरवार्ड कम्युनिटीको प्रतिसेयर आम्दानी गत वर्षको तुलनामा ४२ रुपैयाँ ९ पैसाले घटेपनि अझै सर्वाधिक १०३ सय ३६ रुपैयाँ हुनेमै दर्ज भएको छ । छिमेकको ७८ रुपैयाँ ४७ पैसा, साना किसानको ६० रुपैयाँ ८४ पैसा प्रतिसेयर प्रतिसेयर आम्दानी देखिन्छ ।
१२ लघुवित्तको प्रतिसेयर नेटवर्थ घट्यो
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १२ लघुवित्तको प्रतिसेयर नेटवर्थ घटेको छ । यस अवधिमा फस्र्ट, फरवार्ड कम्युनिटी, कालिका, किसान, महुली सामुदायिक, नयाँ नेपाल, एनएमबि, साना किसान, सूर्योदय, स्वावलम्बन, स्वरोजगार र वोमीको प्रतिसेयर नेटवर्थ घटेको हो ।
महुली सामुदायिकको प्रतिसेयर नेटवर्थ गत वर्ष भन्दा २०५ रुपैयाँ ३७ पैसाले घटेर ३२५ रुपैयाँ ५७ पैसा पुगेको छ । यता, नयाँ नेपालको ९४ रुपैयाँ १३ पैसाले नटवर्थ घटेको छ । फरवार्ड कम्युनिटीको नेटवर्थ ५७ रुपैयाँ ४९ पैसाले घटे पनि अझै सर्वाधिक ३९३ रुपैयाँ ९६ पैसा रहेको छ ।